“बिमलेन्द्र निधिको सभापतिमा दाबेदारी नेपाली कांग्रेसको लागि अपरिहार्य हो” – Shirish News
“बिमलेन्द्र निधिको सभापतिमा दाबेदारी नेपाली कांग्रेसको लागि अपरिहार्य हो”
नेका प्रदेश २ संसदीय दलका नेता रामसराेज यादवको विशेष अर्न्तवार्ता
शिरीषकर्मी रणधीर चौधरीले पूर्व सभासद्, धनुषाका पूर्व जिला सभापति , नेपाली कांग्रेस बाट प्रदेश नं. २ का प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रदेश २ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव संग लामो कुराकारनी गरेका थिए । प्रस्तुत छ नेता यादव संग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आउन लागेको छ । कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधी ले सभापति पदको लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको राजनीनिक आधारभूमी धनुषा रहँदै आएको छ । तपाईँ पनि धनुषाबाट राजनीति गर्नुहुन्छ र बिमल जीको समकालिन समेत हुनुहुन्छ । तपाँइलाई के लाग्छ उहाँको दाबेदारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उहाँको दाबेदारी जायज मात्रै होइन अपितु नेपाली कांग्रेसको लागि अपरिहार्य हो । बिमलजी सभापतिको हकदार पनि हो । बिमलजीलाई २४ वर्षको उमेर मै बीपी कोईरालाले नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति बनाउनु भएको थियो, धनुषा अधिवेशन बाट । बीपी जस्तो दुरदर्शी राजनीतिज्ञले त्यतीकै त बनाउनु भएन होला ! बिमलजी को राजनीतिक जुनुन र प्रजातन्त्र प्राप्तीको लागि थाल्नुभएको संघर्षको मुल्याङ्कन गरी उहाँलाई नेवि संघको सभापती बनाइएको हुनुपर्छ । बीपीलाई थाहा थियो होला की बिमलजी भविष्यमा नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने क्षमताका धनी हुनुहुन्छ । र वास्तवमा बिमलजी त्यहीअनुरुप पार्टीमा सक्रिय भई उपसभापति सम्म बन्न सफल हुनुभएको छ । र मेरो बुझाईमा अब समयको माग अनुसार उहाँले सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
नेबीसंघको सभापति भईराख्दा बिमलजीको कार्यकाल कस्तो रहेको थियो ?
मलाई याद छ काठमाण्डौको टुँडिखेलमा तत्कालिन राजाको बिरोध गर्नुभएको थियो । बिद्यार्थीको हकमा बिभिन्न खाले उपल्ब्धी मुलक निणर्यहरु त गर्नुनै भएको थियो ।
बिमलजीले आफ्नो बुवा मेहन्द्र नारायण निधीको बिरासत पाउनु भएको छ । उहाँ जस्तै कांगे्रसमा अरु नेताहरुको पनि छ । ती नेताहरुले पनि सभापतिको उम्मेदवारी दिनुभएको छ । अनि यस्तो अवस्थामा बिमलजी कै दाबेदारी किन स्विकार्य हुन्छ ?
सही प्रश्न गर्नुभो । नेपाली कांग्रेसमा वास्तवमा लिगेशी बोकेका धेरै नेताज्यूहरु हुन्छ । तर राजनीतिक सक्रियता र त्यागको हिसाबले बिमलजी ती मध्ये अब्बल हुनुहुन्छ । कक्षा ८ मा पढ्दा कलिलो उमेर देखि उहाँ प्रजातन्त्रको लडाईमा आफुलाई होमिनु भयो । विद्यार्थी राजनीतिक देखि पंचायत बिरुद्धको आन्दोलनका क्रम मा उहाँ कयौँ पटक जेल जीवन भोग्नु भयो । राजनीतिक सुझबुझमा समेत उहाँ अब्बल हुनुहुन्छ ।
शेरबहादुर जी चार पटक प्रधानमन्त्री हुनुभो, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक को सभापति हुनुभो, फेरी नेपाली कांग्रेसको सभापति । देउवाजीको यो उपल्बधीपुणर् राजनीतिक यात्राका महारथी कोई छन् भने उनी हुन, बिमल जी । मलाई याद छ, जतीबेला शेरबहादुर जी देशको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ,त्यसकालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो । स्वर्गीय गिरीजा प्रसाद कोईरालाको बिपक्षमा शेरबहादुरजी ले दाबेदारी दिनुपर्छ भनी आवाज आयो । चिरंजीबी वाग्लेज्यूहरुले देउवाजी लाई खुलेर साथ दिने आँट गर्नुभएन । र मलाई स्मरण छ की त्यतीबेला पनि बिमलजी र हामीले देउवालाई खुलेर साथ दिएका थियौँ ।
नेपाली कांग्रेसमा खेमाको राजनीति हावी रहेको कसैबाट लुकेको छैन् । बिमलजी माथि पनि अमुक खेमा मा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा समग्र नेपाली कांग्रेसले उहाँ कै सभापतित्वलाई किन स्वीकार्लान र ?
हरेक प्रजातन्त्रिक पार्टीहरुमा लबी हुन्छ । मुद्दा र बिचारधाराको लबी हुनु स्वभाविक हो र लोकतान्त्रिक दलको सौन्दर्यता पनि यही नै हो । त्यसैअनुरुप कांग्रेशमा पनि एकप्रकारको खेमा देखिएको छ । बिचारधारा र मुद्दामा जती अनुपातमा बहस हुनुपथ्र्यो त्यसमा केही न केही कमी अवश्य हुँदै आएको हामीलाई अनुभुत हुँदै आएको छ । बिमलजी ले भन्नुभएको छ की आउँदो चुनावमा नेपाली कांग्रेश अब्बल पार्टीको रुपमा आउनुपर्छ । साथै आसन्न महाधिवेशन सर्वसम्मतीको आधारमा हुनुपर्छ । कांग्रेशमा खेमा रहेको कारण बिमलजी पनि कुनै अमुक खेमा मा लागेको देखिनु हुन्छ । तर उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांगे्रश भित्रको खेमाकेन्द्रित बहसलाई एउटा नयाँ मोड दिनुभएको छ । उहाँले अब कांग्रेशको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भन्नु भएको छ । र बिमलजीको उक्त भनाईमा हाम्रो पुणर् समर्थन छ । म त भन्छु रामचन्द्र पौडेलजी लगायत शेरबहादुरजीहरुले पनि अबको नेतृत्वलाई नयाँ पुस्तामा हस्तानान्तरण गर्ने आँट देखाउनुपर्छ । र साथै सर्बसहमतीय प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव जुन बिमलजीले गर्नुभएको छ उक्त प्रस्तावमा सबैजना एकजुट भएर अगाडी बढ्नु आवश्यक छ किन भने यसो गर्ने हो भने नेतृत्वमा को आउँछ यकिन हुँदैन । सबैभन्दा महत्वपुर्ण के हो भने कांग्रेस भित्र देखिदै आएका सानामसिना बिवाद, मतभेदहरुको अन्त्य सुनिश्चित छ । र आउँदो चुनावमा नयाँ उर्जाका साथ जान सकिन्छ जसले कांग्रेशलाई अब्बल स्थानमा पुर्याउने निश्चितप्रायः छ ।
म तपाइँको माध्यमबाट शेरबहादुरजीलाई याद गराउन चाहन्छु की उहाँ नेपाली कांग्रेश प्रजातान्त्रिकबाट प्रधानमन्त्रि भएको बेला जनकपुरको ‘तिरहुतीया गाछी’ मा भन्नुभएको थियो, “ म नेपाली कांग्रेसलाई दमजम (दलित,महिला,जनजाती र मधेशी)को पार्टी बनाउँछु ।” आज म शेरबहादुरजी लाई भन्न चाहन्छु की के बिमलजी ‘दमजम’ भित्र पर्नु हुन्न ? मलाई सोध्नु हुन्छ भने शेरबहादुरजीले आफ्नो सक्दो उर्जा लगाएर बिमलजी लाई सभापती बनाउन लाग्नु पथ्र्यो ।
बिमलजीको दाबेदारीले मधेशमा राम्रो उत्साह रहेको बुभिन्छ । तर साथै शंका यो पनि गरिन्छ की फगत मधेशी भएकै कारण बिमलजी लाई सभापती बन्नबाट बन्देज त गरिँदैन ?
गम्भिर प्रश्न हो यो । एउटा कुरामा म प्रस्ट छु । काठमाण्डौको मनोविज्ञान भनेको बर्चस्ववादी प्रबृत्ति किसिमको छ, अहिले पनि । पार्टी लगायत अन्य सबै कुराको लगाम आफ्नै हातमा राख्न चाहन्छन् । बाहुन-क्षेत्रीको मोनोपोली बारे म अबगत रहँदै आएको छु । र बर्चस्वादी प्रबृतीलाई तोड्न समय लाग्छ । यद्धपी बिमलजी लाई मैले जाने अनुसार, मेरो अनुभवको आधारमा यती भन्न सक्छु की बिमलजी को ब्यक्तित्व ‘राष्ट्रिय स्तर’को छ । हिमाल, पहाड र मधेश-तीनै क्षेत्रमा उहाँको राम्रो पकड छ । इतिहासा साक्षी छ की नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली भएता देखि हुँदै आएको निर्वाचनमा मधेशले कांग्रेशलाई अधिकत्म मत दिँदै आएको छ । अहिले सम्म नोपाली कांग्रेशले निर्माण गरेका सरकारको मेरुदण्ड मधेश रहँदै आएकोम छ । आज मधेशमा कांग्रेश किन कमजोर हुँदै आएको छ ? मधेशका जायज मागहरुलाई काठमाण्डौले उपेक्षा गर्यो । त्यसमा अन्य दल लगायत कांग्रेशको पनि केही हदसम्म भूमिका रह्यो । हुन त पछिल्ले समय मधेशको मुद्दा उठ्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयाश नेपाली कांग्रेशले नगरेको होइन् । शुसील कोइरालाजी प्रधानमन्त्रि भएको बेला संबिधान संसोधन गरी मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयाश गरेकै हो । यसमा कसले अबरोध गर्यो भनी कसैबाट लुकेको छैन् । यस बिषयमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्मछ ।
तर सुस्तरी मधेशमा कांग्रेस कमजोर भएको अवस्थालाई नकार्न मिल्दैन् । अहिले नेपाली कांग्रेस संग राम्रो मौका छ । बिमलजी लाई सभापती बनाउने हो भने यसले मधेशमा कांग्रेश प्रति भरोसा र विश्वास बढ्ने निश्चि छ । कांग्रेश मधेशमा सहजै रिभाइव गर्नसक्छ । तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, २०१५ सालमा बिपी कोइराला ले सरकार बनाउँदा आफ्नो मन्त्रिमण्डल लाई पूणर् समावेशी बनाउनुभएको थियो । मधेशी, जनजाती, महिला सबैले स्थान पाएको थियो । र ‘दमजम’ हुँदै त्यसमा कणर्ालीलाई समावेश गरी ‘कदमजम’को पार्टी बनाउनुपर्छ भनी भन्ने नेताज्यूहरुले समावेशिताको चस्मा लागई बिमलजी लाई सभापती बनाउँदा कांग्रेसलाई हुने फाइदा बारे कांग्रेस भित्र जोडदार भाष्यको उठान गर्नुपर्छ ।
प्रदेश नम्बर २ बाट बिमलजी लाई कतिको समर्थन रह्ने सम्भावना छ ? भनिन्छ की आफ्नै प्रदेश मा उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ ?
कतिलाई लाग्दो हो की पछिल्लो चुनावमा प्रदेश नं. २ बिमलजी को जिम्मा दिइएको थियो । यस प्रदेशमा कांग्रेशले अपेक्षाकृत सिट ल्याउन सकेन । म के भन्न चाहन्छु भने, पछिल्लो समय मधेश आन्दोलनको को ‘ह्याङ्गओवर’ थियो । पुराना दलहरु माथि एक किसीमको आक्रोस थियो मधेशी जनतामा । र नेपाली कांग्रेसमा हुँदै आएको अन्तरघातको कारण अपेक्षा बमोजिम सिट जित्न सकिएन । तर समग्रमा कांग्रेसको प्रदर्शन राम्रै थियो ।
अब रह्यो कुरा आउँदो महाधिवेशन र बिमलजी प्रतिको समर्थन । यसमा म के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश नं. २ बाट बिमलजी लाई अपार समर्थन रह्ने छ । अहिले धेरै नेताज्यूहरु खुल्नुभएको छैन् । म नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं. २ को संसदिय दलको नेताको हैसियतले पनि जिल्ला सभापतीज्यूहरु लगायत जिलाका अन्य कांग्रेसी मित्रहरु संग निरन्तर सम्पर्कमा रहँदै आएको छु । उहाँहरुमा बिमलजीलाई सभापती बनाउन हरसम्भव प्रयाश गरिने भावना पाएको छु । अहिले महाधिवेशको समय बाँकी छ । बिभिन्न कारणवस उहाँहरु खुल्नु भएको छैन् । तर ‘ग्रेजवली’ प्रदेश नं. २ लाई प्रतिनीधित्व गर्ने मित्रहरु मुखर भएर आउनु हुनेछ, कुनै संका छैन् । समग्रमा भन्दा, प्रदेश २ बाट बिमलजी लाई अपार समर्थन रह्नेमा कुनै शंका नगरे हुन्छ ।
अहिले देउवा र पौडेल/कोईराला खेमालाई चिरेर बिमलजी सभापती बन्न सफल हुनुहुन्छ भनी तपाइँलाई लाग्छ ?
आवश्य । १४औँ महाधिवेशनमा बिमलजी ले सभापती पदमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा नेपाली कांग्रेश भित्र राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएको भान हुन्छ हामीलाई । नेपालका बुद्धजिबी, स्तम्भकार लगायत बिभिन्न थिंकट्यांक को बिचार बुझ्दा कांग्रेस भित्रको राजनीति बिमलजीको वरीपरी घुमेको बुझिन्छ । मधेश जुनकी कांग्रेसको आधारभूमी रहँदै आएको त्यहाँ कांग्रेसलाई पुणः बलियो गर्न बिमलजी सभापती बन्नु पर्छ भनी आवाज आइ रहेको त छ नै, साथै कांग्रेस मा हरेक इथनिसीटी का नेताले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्छ र खेमाको राजनीति लाई अन्त्य गर्न पनि बिमलजी एउटा सार्थक अनुहार हो भने बुझाईको आयतन फराकिलो हुँदै छ ।